Ethereum Classic (ETC) In Bitcoin (BTC) Heerka Sarrifka
Ethereum Classic si Seeraar sarrifka maanta. Qalabka lacagta lacagta lagu beddelanayo - qiimaha maanta ee sicirka lacagta ee adduunka oo dhan.
Ethereum Classic In Bitcoin sarrifka maanta
1 Ethereum Classic (ETC) uyeelaysaan 0.000921 Bitcoin (BTC)
1 Bitcoin (BTC) uyeelaysaan 1 085.29 Ethereum Classic (ETC)
Isweydaarsiga Ethereum Classic to Bitcoin heerka sarrifka dhabta ah ee maanta waa 19 January 2020. Macluumaadka isha laga keenay. Warbixin ku saabsan qiimaha Ethereum Classic to Bitcoin ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Sicirka sarrifka ee lagu muujiyey boggan waa sarrifka lacagaha si rasmi ah loo aasaasay maanta 19 January 2020 iyadoo loo eegayo natiijooyinka ganacsiga sarrifka. Kaliya xogta rasmiga ah ee sicirka sarrifka ee bartayada ayaa la isticmaala.
Heerka sarrifka Ethereum Classic gudaha Bitcoin sida laga soo xigtay suuqa sarrifka lacagta suuqyada 19/01/2020.
1 Ethereum Classic maanta waa 0.000921 Bitcoin ee suuqa crypto. 1 Ethereum Classic wuxuu ku dhacay -0.000128 Bitcoin maanta suuqa ugu weyn Yurub ee Yurub. Maanta, Ethereum Classic wuxuu ka qiimeeyay Bitcoin ee Yurub. 1 Ethereum Classic hadda waa kharash 0.000921 Bitcoin - sicirka suuqa crypto.
Ethereum Classic In Bitcoin Heerka Sarrifka maanta 19 January 2020
Dhaqdhaqaaqa Ethereum Classic to Shaxdayada Bitcoin dhowr maalmood ka dib waxaa lagu muujiyey shaxdayada. Wixii iibsiga faa'iido leh ee lacagta digital - isbarbar dhig firfircoonaanta heerka sarrifka maalmihii dhawaa. Waa muhiim in la arko ma aha oo kaliya sicirka sarrifka ee maanta, laakiin sidoo kale sicirrada shalay iyo maalintii ka hor. Falanqee oo saadaalin heerka sarrifka ee Ethereum Classic ilaa Bitcoin berrito oo u soo iibso faa'iidada lacagta digital.
19/01/2020 0.000921 -0.000128 ↓
18/01/2020 0.00105 0.000096822700180921 ↑
17/01/2020 0.000953 0.000091480038137402 ↑
16/01/2020 0.000862 0.0000074129655189634 ↑
15/01/2020 0.000854 0.000178 ↑
Beddelaan Ethereum Classic In Bitcoin
Ethereum Classic (ETC) In Bitcoin (BTC) qiimaha sicirka
Ethereum Classic (ETC) In Bitcoin (BTC) shaxda qiimaha taariikhda
10 000 Ethereum Classic sicirka sarrifka ayaa la eg 9.21 Bitcoin. 50 000 Ethereum Classic sicirka sarrifka ayaa la eg 46.07 Bitcoin. 100 000 Ethereum Classic hadda waa mudan yihiin 92.14 Bitcoin. Qiimaha 250 000 Ethereum Classic sicirka sarrifka waa 230.35 Bitcoin. 1 Ethereum Classic wuxuu la mid yahay maanta 0.000921 Bitcoin marka loo eego sicirka sarrifka ee suuqa crypto. 1 Ethereum Classic waxaa ku dhacay -0.000128 Bitcoin maanta marka loo eego sicirka sarrifka ee suuqa hogaaminta wadanka ee maanta.
9.21 BTC 46.07 BTC 92.14 BTC 230.35 BTC 460.71 BTC 921.41 BTC 2 303.53 BTC 4 607.06 BTC
Marka loo eego 1 BTC waxaad ubaahantahay inaad bixiso 1 085.29 Ethereum Classic . 5 426.46 Ethereum Classic, qiimaha 5 Bitcoin sicirka sarrifka maanta. Marka loo eego 10 BTC waxaad ubaahantahay inaad bixiso 10 852.91 Ethereum Classic . 27 132.28 Ethereum Classic, qiimaha 25 Bitcoin sicirka sarrifka maanta. Maanta, Ethereum Classic sicirka sarrifka ayaa hoos u dhacay Bitcoin. 1 Ethereum Classic hadda waa kharash 0.000921 Bitcoin - heerka sarrifka ee suuqa crypto.
1 085.29 ETC 5 426.46 ETC 10 852.91 ETC 27 132.28 ETC 54 264.57 ETC 108 529.14 ETC 271 322.85 ETC 542 645.70 ETC